गगनजी ले गल्ती गर्नुभयो: धनराज गुरुङ - Nuwakot Express
गगनजी ले गल्ती गर्नुभयो: धनराज गुरुङ
(पञ्चा सिंहको प्रश्न, धनराज गुरुङको उत्तर)
पञ्चा : तपाईं कांग्रेसमा स्वच्छ छवि भएको विद्रोही युवा नेताको पहिचान बनाउनुभएको मान्छे । घैँटे (कुमार श्रेष्ठ इन्काउन्टर)काण्डताका विरोधमै उत्रिनुभयो, छवि बिग्रिएला भन्ने लागेन ?
धनराज : म पार्टी (कांग्रेस)को खेलकुद विभाग प्रमुख थिएँ । उहाँ (घैँटे) पनि सोही विभागमै भएकाले माथिको निर्देशनबमोजिम यथार्थ बुझ्न खोजेको थिएँ । म उहाँको पक्षमा थिइनँ, तर हत्याको विपक्षमा थिएँ । उहाँले केही नाजायज काम गरेको भए कानुनबमोजिम जेलमा हाल्नुपथ्र्यो । त्यसरी हत्या नै गर्न नहुने थियो भन्ने हाम्रो कुरा थियो ।
पञ्चा : तपाईं पार्टीको प्रभावशाली युवा नेता भए पनि चुनावमा टिकट पाउनुभएन नि ? खास कारण के हो ?
धनराज : नेपाली राजनीतिमा धनवाद र डनवाद हावी भएको छ । त्यसबाट कांग्रेस पनि अछुतो नभएको अवस्था छ । जनताको आवाज उठाउनेलाई छेक्ने प्रयास भयो । तर, यसरी छेकेर छेकिन्न ।
पञ्चा : कांग्रेसमा नमरुन्जेल युवा नेता भनिरहने परम्परालाई तपाईंहरूको पुस्ताले भत्काउन सक्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
धनराज : कांगेस पुरानो पार्टी भएकाले यसमा नेता पनि थुप्रै छन् । नेतृत्व गर्ने कौशल त्यो व्यक्तिमा हुन्छ, ऊ भौतिक तथा मानसिक दुवै रूपमा तन्दुरुस्त होस् । कांग्रेसमा भएको पुरातन शैलीको नेतृत्वलाई भत्काउनैपर्छ । हामी त्यही अभियानमा लागिरहेका छौँ । हामी कांग्रेसमा उमेर होइन, विचार युवा भएको नेतृत्व चाहन्छौँ ।
पञ्चा : नेपाली राजनीतिमा सबल युवापुस्ताको सार्थक सहभागिता बढाउन के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
धनराज : अहिले समग्र नेपाली राजनीति नै भ्रष्टीकरणतिर गइराखेको छ । तसर्थ, युवाहरूमा राजनीतिप्रति आकर्षणभन्दा पनि विकर्षण बढी छ । उनीहरूको सहभागिता बढाउनका लागि यहाँको राजनीतिमा शुद्धीकरण गर्न जरुरी छ ।
पञ्चा : कांग्रेसमा गगन थापालगायतकाले वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको विकल्प खोज्नुपर्छ, युवापुस्ताको नेतृत्व चाहियो भनिराख्नुभएको छ । अझ उहाँले सभापतिलाई हस्तक्षेप गर्ने कुरा गर्नुभयो । के सम्भव छ यसरी नेतृत्व बदल्न ?
धनराज : हामी विधि र प्रक्रियासहितको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा विश्वास गर्ने पार्टी हौँ । तसर्थ, यो हस्तक्षेप भन्ने हामीलाई सुहाउँदैन । यसको अर्थ ‘कु’ भन्ने हुन्छ । हस्तक्षेपबाट पार्टी सभापति फेर्न सकिँदैन । विधि र प्रक्रियाद्वारा मात्र सकिन्छ । गगनजीले शब्द चयन गर्दा त्रुटि गर्नुभयो । त्यसमा विचार पुर्‍याउन उहाँलाई आग्रह गर्छु ।
पञ्चा : डा. गोविन्द केसीको आन्दोलन, गिरफ्तारी र नेपालको न्यायालयलाई कसरी नियालिराख्नुभएको छ ?
धनराज : डा. केसीले विकृति र विसंगतिविरुद्ध आन्दोलन गर्नुभएको मेरो बुझाइ छ । जुन उहाँलाई पक्राउ गरियो त्यो गलत छ । यसअघि, पनि धेरैलाई अदालतको मानहानि गरेको मुद्दा लागेको थियो । तर, यसरी पक्रेर बयान लिएको थाहा छैन । उहाँले मान्छे मारेको या अन्य जघन्य अपराध केही गरेको होइन । यसलाई मैले उहाँको मुख थुन्ने अभियानस्वरूप भएको घटनाका रूपमा लिएको छु । यो सरकारलाई पनि थाहा नदिईकन भएको घटना भएको बुझिएको छ । तसर्थ, न्यायालयले प्यारालाल सरकार चलाउन खोजेको छ ।
पञ्चा : तपाईंं जनजाति पृष्ठभूमिको नेता भएर पनि जातीय पहिचानसहितको राज्यको विरोध गर्नुहुन्छ नि, किन ?
धनराज : मैले राजनीति कुनै जातविशेषका लागि भनेर गरेको होइन । आन्दोलनमा धेरै रगत–पसिना बगाएँ । त्यो कुनै समुदायका लागि मात्र होइन । यहाँ एक सय २५ जातजाति बस्छन् । सबैले राज्य माग्ने हो भने जातीय द्वन्द्व हुन्छ, यसबाट मुलुकलाई बचाउनका लागि मैले जातीय राज्यको विरोध गरेको हुँ । समग्र नेपाल हाम्रो घर हो । सबै नेपाली हाम्रा परिवारका सदस्य हुन् । सबैको एकताले मात्र देश बन्छ ।
पञ्चा : एमाले, माओवादीलगायत देशका सबै वामपन्थी तथा कम्युनिस्टहरू एक हुँदा कांग्रेसको अस्तित्व संकटमा पर्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
धनराज : अरू पार्टी ठूलो भए भनेर आफ्नो पार्टी सानो होला भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्दैनौँ । यो अरूको घर भत्किएपछि आफ्नो घर अग्लो भएर रमाएजस्तै कुरा भयो । हामी जसरी हुन्छ कांग्रेसलाई राम्रो बनाउने अभियानमा लाग्नेछौँ । म त सबै कम्युनिस्ट मिलेर नेपालमा टु पार्टी सिस्टम होस् भन्ने कामना गर्छु । यसो गर्दा स्थिरता हुन्छ ।
सचेतन सामुदायिक सिकाई केन्द्र मार्फत तीन महिनाको सिलाई बुनाई तालीम
बैशाख २८, २०७५ - शुक्रबार
नुवाकोट एक्स्प्रेस संवाददाता : सचेतन सामुदायिक सिकाई केन्द्र मार्फत...
नुवाकोटमा दलहरुवाटै संरक्षित अपराधिक समुह निर्वाचनमा चुनौति
मंसिर ५, २०७४ - मङ्लबार
काठमाडौं, मंसिर ५ । सुरक्षा निकायले नुवाकोटमा दलहरुवाटै संरक्षित...
त्रिशुली नदिमा भर्खरै बस खस्यो, दर्जन बढी मृत्यु भएको आसंका, बस पुरै पानीमा डुब्यो
मंसिर १३, २०७४ - बुधबार
१३ मंसिर, काठमाडौं । काठमाडौंबाट अर्घाखाँचीतर्फ गइरहेको यात्रुवाहक बस...
केरुङनाका हुँदै भित्राईएको १० किलो सुनसहित एकजना पक्राउ
मंसिर १७, २०७४ - आइतवार
काठमाडौं – रसुवाको केरुङ नाकाबाट भित्राइएको अवैध १० किलो...
कम्युनिष्टहरू राज्यसत्ताको दोहन र सुविधा लिएर मोजमस्तीमा जीवन बिताउन थाले : बाबुराम भट्टराई
असार ३, २०७५ - आइतवार
पोखरा, ३ असार । नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा...